Wednesday May 29, 2019 - 22:10:55 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Waxaa magaalada Makka Al Mukarrama ee dhulka Xaraneynka kusii qulqulaya inta badan hoggaamiyaasha dawaaqiidda Carabta iyo kuwa kale ee ka jira caalamka Islaamka.
Shir ay soo qaban qaabisay dowladda Aala Sacuud ayaa lafilayaa in uu berri ka furmo magaalada Makka kaas oo la sheegay in diiradda lagu saarayo xiisadaha udhaxeeya xulufada Mareykanka iyo iiraan ee kajira mandiqadda loo bixiyay Bariga dhexe.
Salmaan Bin Cabdi Casiis oo ah boqorka dabadhilifka Sacuudiga ayaa shirkan qaban qaabiyay waxaana markii ugu horraysay laba sano kadib ka qeyb gelaya mas'uul sare oo katirsan dowladda dabadhilifka Qadar oo khilaaf daran kala dhaxeeyay xulufada Aala Sacuud iyo Imaaraatka Carabta.
Ilo wareedyo ayaa sheegaya in madasha shirka uu xaadiri doono Cabdalla Bin Naasir Aala Thaani oo ah R/wasaaraha Qadar, shirkan ayaa imaanaya isbuuc kadib oo hanjabaadyo ay hawada isku mariyeen Donald Trump iyo Xasan Ruuxaani hoggaamiyaha dowladda shiicada Iiraan.
Diblumaasiyiin ku sugan wadanka Sacuudiga ayaa sheegaya in shirkan lagasoo saari doono cambaareymo ka dhan ah dowladda Iiraan islamarkaana dowladaha carabta ay ku baaqi doonaan in aan xaalad dagaal laga abuurin mandiqadda Khaliijka.
Xoogag hubaysan oo Askari ku dilay magaalada Baydhabo qorigiina ka furtay.
dhageyso: Xalqada 5aad dhulalka laboobay ee Muslimiinta sidee loo qabsaday magaalada Harar.
Biriq dad isku qoys ah ku dishay duleedka magaalada Dhuusamareeb.
Sawirro: Dad badan oo ku dhintay Daadad ku rogmaday magaalada Qardho.